RAR Ithuluzi Lokulungisa. RAR Ukubuyisela Isoftware. Lungisa RAR Amafayela.
DataNumen RAR Repair iyona best RAR ithuluzi lokulungisa nokubuyisa emhlabeni. Ingalungisa abonakele RAR izingobo zomlando bese uthola idatha yakho eningi ngangokunokwenzeka, ngaleyo ndlela unciphise ukulahleka kokonakala kwefayela.
4.90 / 5 (kusuka kumavoti angu-1,600)
Kungani DataNumen RAR Repair?
Izinga lokutakula yi-most umbandela obalulekile we RAR umkhiqizo wokutakula. Ngokususelwa ekuhlolweni kwethu okuphelele, DataNumen RAR Repair inezinga lokululama elihle kakhulu, ingcono kakhulu kunabanye abancintisana nabo, kufaka phakathi iWinRAR kanye nezinye RAR amathuluzi wokulungisa, emakethe!
Funda kabanzi mayelana nokuthi kanjani DataNumen RAR Repair kubhema umncintiswano
Angibanga nankinga ngale nqubekela phambili evelele. Izwi kulabo bantu okungenzeka babenezinkinga ezithile. Uma ngabe 'iDathaNemen Rar Uhlelo Lokulungisa
Ngingajabula kakhulu ukushiya okubuyiselwayo maqondana nokuzibandakanya kwami ​​okuhle nomkhiqizo wakho _ izeluleko ezithile maqondana nokwehluleka okungokwemvelo
Izici eziyinhloko ku DataNumen RAR Repair v3.5
Ukusekela ukulungisa zonke izinhlobo ze- RAR namafayela we-SFX.
Ukusekela ukuthola kabusha izingobo zomlando ezinamavolumu amaningi futhi eziqinile.
Ukusekela ukuthola izingobo zomlando ezifakwe ngekhodi nge-password.
Ukusekela ukuthola nokukhetha ifayela le- RAR kanye nezinqolobane zokugcina umlando ze-SFX ezizolungiswa kukhompyutha yendawo.
Ukusekela ukulungisa RAR amafayela kwimidiya eyonakele, njengamadiski e-floppy, Zip amadiski, ama-CDROM, njll.
Ukusekela ukulungisa iqoqo le- RAR namafayela we-SFX.
Ukusekela ukulungisa RAR izinqolobane ezinkulu njengo-8, 388, 608 TB (ie 8, 589, 934, 592 GB).
Ukuxhaswa kokusekelwa neWindows Explorer, ukuze ukwazi ukulungisa i- RAR ingobo yomlando nemenyu yokuqukethwe yeWindows Explorer kalula.
Ukusebenzisa DataNumen RAR Repair Ukubuyisela Konakele RAR Archive
Lapho yakho RAR ingobo yomlando ilimele noma yonakele ngenxa yezizathu ezahlukahlukene futhi awukwazi ukuyivula ngokujwayelekile, ungasebenzisa DataNumen RAR Repair ukuskena RAR ingobo yomlando bese ubuyisa amafayela akuyo ngangokunokwenzeka.
Qaphela: Ngaphambi kokuthola noma yikuphi okonakele noma okonakele RAR ingobo yomlando ne- DataNumen RAR Repair, ngicela uvale uNqobileRAR kanye nanoma yiziphi ezinye izinhlelo zokusebenza ezingafinyelela kufayili ye- RAR ingobo yomlando.
Khetha okonakele noma okonakele RAR ingobo yomlando ezolungiswa:
Ungafaka i RAR igama lomlando ngqo noma chofoza ukubhekabheka bese ukhetha ingobo yomlando. Ungase futhi uchofoze ifayela le- ukuthola inkinobho RAR ingobo yomlando ezolungiswa kukhompyutha yendawo.
Ngephutha, DataNumen RAR Repair izolulama futhi ikhiphe amafayela kufayela le- RAR ingobo yomlando kwisikhombi esibizwa ngokuthi yi-xxxx_recovered, lapho i-xxxx igama lomthombo RAR ingobo yomlando. Isibonelo, komthombo RAR ingobo yomlando Elimele.rar, umkhombandlela wokukhipha okuzenzakalelayo uzolinyazwa_utholwe. Uma ufuna ukusebenzisa elinye igama, sicela ukhethe noma usethe ngokufanele:
Ungafaka igama lomkhombandlela wokukhipha ngqo noma uchofoze ifayela le- ukuphequlula bese ukhetha umkhombandlela.
Chofoza inkinobho, futhi DataNumen RAR Repair intando start ukuskena nokulungisa umthombo RAR ifayela. Ibha yenqubekela phambili
Ngemuva kwenqubo yokulungisa, uma ngabe umthombo RAR ifayela lingalungiswa ngempumelelo, uzobona ibhokisi lomlayezo kanjena:
Manje usungavula umkhombandlela wokukhipha oshiwo esinyathelweni 3 bese uhlola amafayela abuyisiwe kuwo.
DataNumen RAR Repair 3.5 ikhishwa ngoMeyi 3, 2021
DataNumen RAR Repair 3.2 ikhishwa ngoDisemba 18, 2020
DataNumen RAR Repair 3.0 ikhishwa ngoNovemba 4, 2020
DataNumen RAR Repair 2.9 ikhishwa ngoSepthemba 9, 2020
Thuthukisa ukucubungulwa kwethempelirary amafayela.
DataNumen RAR Repair 2.8 ikhishwe ngo-Ephreli 19, 2020
Thuthukisa ukunemba kokutakula nezinga lokutakula.
DataNumen RAR Repair 2.7 ikhishwa ngoNovemba 18, 2019
DataNumen RAR Repair 2.6 ikhishwa ngoJulayi 24, 2019
DataNumen RAR Repair 2.5 ikhishwa ngoJuni 28, 2018
DataNumen RAR Repair 2.3 ikhishwe ngo-Ephreli 20, 2018
Thuthukisa ukutakula kokubethela RAR ezinqolobaneni.
DataNumen RAR Repair 2.2 ikhishwe ngomhla ka-Sep 19, 2016
DataNumen RAR Repair 2.1 ikhishwa ngoSepthemba 14, 2013
DataNumen RAR Repair 2.0 ikhishwa ngoJulayi 6, 2013
Ukusekela WinRAR v5.x.
Phinda ubhale i-interface yomsebenzisi.
DataNumen RAR Repair 1.2 ikhishwe ngomhla ka-Sep 27, 2006
Ukusekela ukulayishwa okonakele RAR noma izingobo zomlando ze-SFX kuseva yethu ye-ftp.
Ukusekela ukubuyisa izinkomba ku RAR ezinqolobaneni.
Thuthukisa indlela yokutakula iphutha.